ဂျာမန်သိုးထိန်းဆိုတာဘာလဲ Dogs World
ခွေး ဂျာမန်သိုးထိန်း ၎င်းသည်ကလေးများရှိပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုသောသူများထဲတွင်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူသည်အလွန်ချစ်ခင်တွယ်တာတတ်သူ၊ ဒါပေမယ့်လည်းတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အုပ်ထိန်းသူနှင့်ကာကွယ်ပေး။ ၎င်းသည် ၄၀ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသောတိရစ္ဆာန်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သူနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၃ နှစ်ကြာနေထိုင်လိုသူမည်သူမဆို၏အကောင်းဆုံးလေးချိူ့သူငယ်ချင်းဖြစ်လာသည်။
သငျသညျမိသားစုတိုးမြှင့်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, ရှာဖွေတွေ့ရှိ ဘယ်လိုဂျာမန်သိုးထိန်းဖြစ်ပါတယ်.
ဤသည်မှာကြီးမားသော furry လူသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ့ကိုမလွှမ်းမိုးစေဘဲကြီးမားစွာပွေ့ဖက်နိုင်သည်။ သူတို့ကပတ်ပတ်လည်အလေးချိန်နိုင်ပါတယ် 40kgနှင့်အနည်းဆုံး 60cm ညှိုးနွမ်းသွေ့ခြောက်သောအရပ်၌အမြင့်နှင့်အများဆုံး 65cm ရှိသည်။ အဆိုပါကုတ်အင်္ကျီအဖြူသို့မဟုတ် penalized သောအဖြူအစက်အပြောက်နှင့်အတူမှလွဲ။ အားလုံးအရောင်များရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်နားတွင်ကပ်ထားသောနားများဖြင့်မွေးဖွားခြင်းကိုထူးခြားသည်၊ သို့သော် ၃-၆ လအရွယ်တွင်၎င်းတို့ကိုစတင်တည့်မတ်ပေးသည်။
၎င်းတွင်အလွှာနှစ်လွှာရှိသည်။ ရေနှင့်ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်သောပြင်ပတစ်ခုနှင့်အေးသောလများတွင်အပူကိုထိန်းထားသည့်အတွင်းပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုတ်အင်္ကျီသည်တို။ အထူရှိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ရှည်လျားပြီးချောမွေ့နိုင်သည်။ စကားမစပ်၊ အထူးသဖြင့်နွေ ဦး နဲ့ဆောင်း ဦး ရာသီမှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးသူတို့သွန်းလောင်းကြတာကိုသင်သိသင့်တယ် မင်းဒါကိုနေ့စဉ်သန့်ရှင်းပစ်ရမယ်.
ဒါဟာအလွန်အသိဉာဏ်မြင့်မြတ်သောနှင့်အကာအကွယ်ခွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာလူသားများကိုအသက်ကယ်ဆယ်ရာတွင်ကူညီခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသတ္တဝါနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုးမြင်တစ်ခုခုပြောရန်တကယ်ခက်ခဲပါသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ထိုကဲ့သို့သောမဟုတ်သောအရာတစ်ခုတည်းသော 'အနုတ်လက္ခဏာ', သောကွောငျ့ဖွစျသညျ သူကသူမသိသူတွေကိုနည်းနည်းတော့မယုံကြည်ဘူးဒါပေမယ့်ဒီလူတွေကမင်းကိုအားပေးနေရင်အလွယ်တကူပြင်လို့ရတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်လုပ်ရန်ရှိသည်ဆိုခွေးကဲ့သို့ သင်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်း၏အခြေခံစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်ကူညီသည် ဒါကြောင့်ပြnotနာတွေမပေါ်ပေါက်လာအောင်အမြဲတမ်းလေးလေးစားစားဆက်ဆံတာ၊ အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့သူ့ကိုဂရုစိုက်တာ၊ ပြီးတော့သူ့ကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်၊ သူဟာကျွန်ုပ်တို့မိသားစုရဲ့တစိတ်တပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုအသိပေးခြင်း။ ငါထင်တာကဒုတိယတစ်ခုကအရေးအကြီးဆုံးပဲလို့ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လိုချင်တဲ့အိမ်ကိုရှာမတွေ့ရင်စိတ်ကူးယဉ်မိတဲ့တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဟာဘယ်တော့မှပျော်ရွှင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးမျိုးဆက်များ » ဂျာမန်သိုးထိန်းဘယ်လိုနေလဲ